तीन दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न |सद्भावना पार्टीद्वारा आइतबार मधेश बन्दको घोषणा |महतोलाई भेट्न भारतीय राजदुत वीर अस्पतालमा |फेरी एक महिलाको घाँटी रेटेर हत्या |‘राष्ट्र र जनता पहिलो प्राथमिकता’ पाँच जिल्लामा सम्पन्न |विभिन्न अभियोगमा समातिएका १६ जना सार्वजनिक |चट्याङ लागेर दुईको मृत्यु |निर्वाचनमा सघाउन अमेरिका तत्पर : राजदूत बोडी |अवरुद्ध राजमार्ग सुचारु |मियाँको अन्त्येष्टि गरियो | Friday, Jeshtha-10, 2070
तात्दैछ मधेश : नक्कलीको बिगबिगी मधेशमा नक्कली राजनीतिक डाक्टरहरूको बिगबिगीले मधेशका समस्याहरूको विश्वस्त र सफल उपचार हुन नसकेको तथ्यलाई बेलैमा स्कीकार्य गर्दा वेश होला । InterviewsView all
मधेशवादी पार्टीहरू पहिला आफै मिल्नुपर्यो : रामचन्द्र झा (नेता - एनेकपा माओवादी)पहिला मधेशी पार्टीहरू मिल्नुपर्यो, त्यसपछि मोर्चा र माओवादीको बीचमा तालमेल हुनसक्छ । अब मोर्चामा नै तालमेल हुँदैन र उहाँहरू अलग—अलग चुनाव उठ्नुहुन्छ भने माओवादी कोसँग तालमेल गर्ने समस्या उसको अगाडि रहन्छ । त्यसैले यो विषय मधेशमा आधारित पार्टीहरूको हो । कांग्रेसले सबैलाई राजनीति गर्ने आधार दियो : चित्रलेखा यादव (कोषाध्यक्ष - नेपाली कांग्रेस) मधेशी दलहरू खुलेको भन्ने कुरा त प्रष्ट भईसकेको छ, केका लागि भन्ने कुरा । संविधानसभाको चुनावमा एक ढिक्का भएर आएको मधेशी पार्टी कति संख्यामा पुगे त किन फुटे ? त्यसकारणले कांग्रेस त राष्ट्रियस्तरको पार्टी हो । जसको ७५ जिल्लामा संगठन छ । यस्तो पार्टीलाई राष्ट्रिय स्तरको पार्टी भनिन्छ । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको सम्भावना छ : शरत्सिंह भण्डारी (अध्यक्ष–राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी) मधेश राजनीतिमा अत्यन्तै शालिन व्यक्तिको रूपमा महन्थ ठाकुरजी अगाडि हुनुहन्छ र उहाँले मुद्दालाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको हुनाले उहाँकै नेतृत्वको सेरोफेरोमा नयाँ पार्टीको सम्भवना भइरहेको छ । र, हाम्रो पार्टीले पनि यस कुरालाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा हेरेर अगाडि बढिरहेको छ । VideoView all
तीन दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न विराटनगर, ११ जेष्ठ । पुर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानी विराटनगरमा सूचना संकलनको प्रकृया र तत्पश्चात गरिने सूचनाको विश्लेषण र व्यवस्थापन कार्यलाई समय सापेक्ष तथा बस्तुपरक बनाई नेपाल प्रहरीलाई अझ प्रभावकारी तथा संभावित घटना समेतलाईसद्भावना पार्टीद्वारा आइतबार मधेश बन्दको घोषणा काठमाडौं, ११ जेष्ठ । संविधानसभाको मिति घोषणालगायत विभिन्न १० बुँदे माग राखी आमरण अनसनमा बसेको सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई प्रहरीले अपहरण गरेको भन्दै आइतबार मधेश बन्दको आह्वान गरेको छ ।महतोलाई भेट्न भारतीय राजदुत वीर अस्पतालमा काठमाडौ, ११ जेष्ठ । संविधानसभाको निर्वाचन र यससँगसम्बन्धित विभिन्न माग राख्दै आमरण अनसन बसेपछि स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर भएर अस्पताल भर्ना भएका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई भेट्न भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद वीर अस्पताल पुगेका छन् ।फेरी एक महिलाको घाँटी रेटेर हत्या बारा, ११ जेष्ठ । बारामा एक महिलाको घाँटी रेटेर हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । हरैया नयाँ वस्तीकी ३५ वर्षीया प्रमिला लोहनी दाउरा लिन गएको गाँउ नजिकैको चारकोशे जंगलमा हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘राष्ट्र र जनता पहिलो प्राथमिकता’ पाँच जिल्लामा सम्पन्न धनुषा, ११ जेष्ठ । नेपाल परिवार दलले “राष्ट्र र जनता पहिलो प्राथमिकता” राष्ट्रिय जनजागरण अभियान तराई मधेशका ५ जिल्लामा सम्पन्न गरेको छ । प्रथम चरणमा यहि जेठ ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा र सिन्धुलीमा विभिन्न कार्यक्रमहरुका साथ सम्पन्न भएको छ । विभिन्न अभियोगमा समातिएका १६ जना सार्वजनिक चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, ११ जेष्ठ । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले विभिन्न अभियोगमा समातिएका १६ जनालाई सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीले शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर लागुऔषध कारोबारमा संलग्न १४ जना र मोटरसाईकल चोरी गर्ने २ जनालाई सार्वजनिक गरेको हो ।चट्याङ लागेर दुईको मृत्यु कैलाली, १० जेष्ठ । चौरमा बाख्रा चराइरहेको बेलामा चट्याङ पर्दा दुई बालकको मृत्यु भएको छ । निर्वाचनमा सघाउन अमेरिका तत्पर : राजदूत बोडी काठमाडौं, १० जेष्ठ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको २३७ औैं स्वतन्त्रता दिवस शुक्रबार उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको प्रमुख आतिथ्यमा मनाइएको छ । अवरुद्ध राजमार्ग सुचारु सप्तरी, १० जेष्ठ । गृहमन्त्री आए मात्र अन्त्येष्टि तथा आवागमन खुल्ला गर्ने अडान राखेर अवरुद्ध गर्दै आएको राजमार्ग शुक्रवार अपरान्हदेखि सुचारु भएको छ । मियाँको अन्त्येष्टि गरियो शुभनारायण यादव, सप्तरी, १० जेष्ठ । सप्तरीका पूर्व सभासद् स्व. सदरुल मियाँ हकको शुक्रबार बिहान ईस्लाम धर्म अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको छ । गत सोमवार राति हत्या गरिएका हकलाई सप्तरीको कल्याणपुर २ स्थित उनकै घर नजिक रहेको कब्रगाहमा दफनाईएको (अन्त्येष्टि गरिएको) हो । विद्युत महसुल बाँकी रहेका ग्राहकको लाइन काटिदै प्रेमचन्द्र झा, १० जेष्ठ, गौर । नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौर वितरण केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र कुमार चौधरीले विद्युत महशुल बाँकी रहेका ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता रकम असुल्ने काम तिब्र रुपले भईरहेको कुरा बताएका छन् । सवारी साधनको लिलामीबाट करोडौं राजस्व संकलन चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, १० जेष्ठ । बेलहियामा रहेको भैरहवा भन्सार कार्यालय परिसरमा थन्किएका सवारी साधनको लिलामीबाट झण्डै डेढ करोड राजस्व संकलन भएको छ । लामो समयदेखि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया देखाउँदै लिलाम हुन नसकेका सयौं मोटरसाईकल र गाडी भन्सार कार्यालयमा थन्किदा कयौ थोत्रा र कवाडमा बेच्न पर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । सामाजिक परिचालनद्वारा मुस्लिम किशोरीहरुको सशक्तिकरण दिनेश ठाकुर, नेपालगञ्ज, १० जेष्ठ । सामाजिक परिचालनद्वारा मुस्लिम किशोरीहरुको सशक्तिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत किशोरीहरुको अवस्था र अभिभावकको दायित्व विषयक एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।उद्योग संघको आन्दोलन स्थगित रुपन्देही, ९ जेष्ठ । रुपन्देही उद्योग संघले विगत १० दिनदेखि गरेको विभिन्न चरणको आन्दोलन स्थगित गरेको छ । उद्योग संचालनको लागि अपरिहार्य रहेको विद्युत प्रशारणमा उत्पन्न समस्याले औद्यौगिक वातावरण खल्बलिनुका साथै आम उपभोक्तामा परेको ...इप्रकाको नयाँ भवन बन्ने कपिलवस्तु, ९ जेष्ठ । इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरा कपिलवस्तुको नयाँ भवन बन्ने भएको छ । पश्चिम लोकमार्गस्थित बाणगंगा १ पिपरामा रहेको इप्रका पिपराको नयाँ भवन बन्न थालेको हो । नदीमा युवक बेपत्ता कैलाली, ९ जेष्ठ । नदीमा नुहाउने क्रममा बिहीबार एक युवक डुबेर बेपत्ता भएका छन् । महतोको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै काठमाडौं, ९ जेष्ठ । संविधानसभाको निर्वाचन मिति घोषणा, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोग गठन, नागरिकता वितरण निर्देशिका संशोधन, अन्य प्रमाणपत्रको आधारमा मतदाता नामावली संकलनलगायत १० बुँदे माग राखी जेष्ठ ७ गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अवस्था बिग्रिदै गइरहेको छ । एमाले मोरङमा हानाहान विराटनगर ९ जेष्ठ । पार्टीले ‘डन’ पर्शुराम बस्नेतलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा कुर्सी हानाहानसम्मको स्थिति उत्पन्न भएको छ । पूर्व सभासद् हत्याबारे छानबिन सुरु सप्तरी, ९ जेष्ठ । सप्तरीका पूर्व सभासद् सदरुल मियाँ हकको हत्यारा पत्ता नलागेको भन्दै यहाँ शुरु भएको आन्दोलन बुधबार पनि जारी रहेको छ । सोमवार राती सप्तरीको कल्याणपुर २ स्थित विसनपुर चोकमा रहेको हकको आफ्नै पेट्रोल पम्पमा सुतेको अवस्थामा विभत्स हत्या भए पछि आन्दोलन चर्केको हो । उद्योग संघले विद्युत प्राधिकरणमा तालाबन्दी गर्ने चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, ८ जेष्ठ । हालको अनियमित लोडसेडिङ्ग, ट्रिपिङ्ग र लो भोल्टेज समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै चासो नदेखाएका कारण बिहीबारदेखि रुपन्देही उद्योग संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण शाखा बुटवलमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने भएको छ ।	« Prev23 1 .. Next » Current Issue
» सद्भावना पार्टीद्वारा आइतबार मधेश बन्दको घोषणा » सामाजिक परिचालनद्वारा मुस्लिम किशोरीहरुको सशक्तिकरण » इप्रकाको नयाँ भवन बन्ने » करेन्ट लागेर पासवानको मृत्यु » हामी नवौं वर्षमा प्रवेश Refer to read
तीन दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न सद्भावना पार्टीद्वारा आइतबार मधेश बन्दको घोषणा महतोलाई भेट्न भारतीय राजदुत वीर अस्पतालमा फेरी एक महिलाको घाँटी रेटेर हत्या ‘राष्ट्र र जनता पहिलो प्राथमिकता’ पाँच जिल्लामा सम्पन्न Photogallery